Forum serasera malagasy Kilaodinina - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Kilaodinina
rhaj0 - 13/04/2017 13:36
Ka i Pinochet koa t@ fotoan'androny, dia mody sahala @ akoho voakapoka, dia mody hoe marary.. Dia nony tafavoaka, dia ... nihomehezany fotsiny ny ranomason'olona. Ary mbola nampiany hoe, sitrak'Andriamanitra akoriny azany ny fanafahana azy.
Fa mahay mianatra ny fombafomba ry kilaodinina eee..
Tovorandria - 20/04/2017 19:16
Ra ny tiako ndrindra zao d alaina ireo 4 amis eo la reunion kely apidirina ao @ ny hotely A&C daholo, satri zareo matory amin ny sachet mijaly ndrindra refy ririnina, fahavaratra, rivo doza. Teny faly aho raha izany no tanteraka fa avotra ny 4 amis sasany raha izany no tanteraka. Fa aôna Mits mo no olona iray no higoka ny volan bahoaka fa tsy vahoaka?!
rhaj0 - 24/04/2017 15:20
Mila fantarina ny tantara taloha.. fa ny tsivalahara anie mahay ny tantara taloha, dia izay no hahasahiany manao ny ataony eee.. satria nahomby ilay izy taloha.
Inty misy resak'olona ampitaiko eto...
le début de l’ère Trump me rappelle de plus en plus les débuts du IIIe Reich quand les voyous incultes et ignares ont investi les hautes sphères du pouvoir: même grossièreté, même arrogance, même désir de s’en mettre plein les poches, même exaltation du pouvoir sans une once de conscience des lourdes responsabilités qui l’accompagnent
Dia eritrereto tsara fa raha i Trump toa io, ny antsika indray, t@ ireo mpanao coup d'etat t@ 2009, dia h@ io rezima izao io...
Miharena - 25/05/2017 08:46
Raha tsy olona mahay manetry tena tsy afaka hampandroso na handray tanana 4mi.
Mila olona manam-panahy ny Firenena fa lasa mizahozaho rehefa sendra mba mahazo toerana ambony na mba nanam-bintana nahangona harena.
Amin'izao fotoana izao moa dia aiza daholo ilay laza teo aloha fa lasa zary laza ratsy sisa!!
Ny hany azo atao dia ny manoro hevitra ny manam-pahefana eto amin'ny Firenena ny hibebaka sy hanetry tena ary tsy hanao ambony ny fananan-karena intsony fa hametraka ny Fahendrena ho ambonin'ny zava-drehetra.
tovorandria - 25/11/2017 14:00
tsy maits vola iany aloha ny an reo manam pahefana ireo. zareo tokony ho fitartra n1 aza no mampianatra ny vahoaka hanitsakitsaka ny lalam panorenana , sy hifamono mbola velona(Fitsaram bahoaka) ko.